ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း ၁၁၈ မိုင်အနီးတွင် အိမ်စီးကားတစ်စီးနှင့် Faw ကားတို့တိုက်မိရာမှ အိမ်စီးကားပေါ် လိုက်ပါလာသူ သုံးဦးသေဆုံး၍ ငါးဦးဒဏ်ရာရ – Myanma Daily
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း ၁၁၈ မိုင်အနီးတွင် အိမ်စီးကားတစ်စီးနှင့် Faw ကားတို့တိုက်မိရာမှ အိမ်စီးကားပေါ် လိုက်ပါလာသူ သုံးဦးသေဆုံး၍ ငါးဦးဒဏ်ရာရ
posted on May 8, 2017 at 12:22 pm UTC+8 File: Mandalay, Myanmar, Yangon
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဖြူးမြို့နယ် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး ၁၁၈ မိုင်အနီးတွင် မေ ၇ ရက် ညပိုင်းက ယာဉ်မောင်းပါ လူရှစ်ဦး လိုက်ပါလာသော Wish အနက်ရောင် အိမ်စီးကားနှင့် Faw ကား (မြေသယ်ယာဉ်) တို့ တိုက်မိရာမှ အိမ်စီးကားပေါ် လိုက်ပါသူများအနက် ယာဉ်မောင်းအပါအ၀င် သုံးဦးမှာ အခင်းဖြစ်နေရာတွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ငါးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးမှတ်တမ်းအရ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မေ ၇ ရက် ည ၇ နာရီခန့်က ဖြူးအမြန်လမ်းမကြီး ရဲစခန်းအပိုင် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်၌ ယာဉ်ပေါ်တွင် သုံးလသား အရွယ်ကလေးတစ်ဦး အပါအ၀င် လူရှစ်ဦးလိုက်ပါလျက် ယာဉ်မောင်း ကျော်ဇင်အောင် (၂၉ နှစ်) (ဘ)ဦးဌေးအောင် ကမာရွတ်မြို့နေသူ မောင်းနှင်လာသော ယာဉ် အမှတ် 1D/….. Wish အနက်ရောင်ယာဉ်မှာ အမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၁၈ မိုင် ၃ ဖာလုံနှင့် ၄ ဖာလုံအကြားသို့ အရောက်တွင် လားရာတူအတိုင်း အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ယာဉ်မောင်း ဇော်ရဲမောင် (၂၂ နှစ်) ရွှေစေတီလမ်း ရွှေစေတီရပ်ကွက် ဇေယျဝတီမြို့နေသူ မောင်းနှင်နေသော ယာဉ်အမှတ် 9X/…. Faw ကားအပြာရောင်ယာဉ်၏ နောက်ပိုင်းအား အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ၀င်တိုက်မိခဲ့ပြီးနောက် လမ်းလယ်ကျွန်းကပ်တုံးများ ဆက်လက်တိုက်မိကာ လမ်းမ၏၀ဲဘက်ခြမ်းတွင် တစောင်း အနေအထားအတိုင်း တိမ်းမှောက် ရပ်တန့်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ သိရသလောက်ကတော့ Faw ကားနောက်မီးပိုင်းကို ကားလေးက ၀င်တိုက်တယ်။ အိမ်စီးကားက မန္တလေးဘက်က နေလာတာပါ။ မန္တလေး-ရန်ကုန်ဘက်ခြမ်းက လာတာပါ။ Faw ကားက လမ်းဖြတ်ဂငယ်ကွေ့ကနေ ဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီကားလေးကနေပြီးတော့ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲနဲ့ နောက်မြီးပိုင်းကို ၀င်တိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ကျားနှစ်ဦး၊ မတစ်ဦးသေတယ်။ ဒဏ်ရာရတာက ကျန်တဲ့ငါးဦး ဒဏ်ရာရတယ်။ ကားပေါ်မှာက ရှစ်ဦးပါတာ။ ဒဏ်ရာရတဲ့ ငါးဦးကိုတော့ ဖြူးဆေးရုံကို ပို့လိုက်ပြီဗျ” ဟု ဖြူးအမြန်လမ်း မီးသတ်စခန်းမှ ဒုဦးစီးမှူးသိန်းထွန်းက မေ ၇ ရက် ည ၁၀ နာရီခန့်က ပြောကြားသည်။
ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းအရ ဖြူးအမြန်လမ်းမကြီး ရဲစခန်းမှူး နှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ဖြူးအမြန်လမ်းမကြီး မီးသတ်စခန်းမှ ဒုဦးစီးမှူးသိန်းထွန်းပါ တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ အခင်းဖြစ်နေရာသို့ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ Faw ကားယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါသူမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း မရှိဘဲ Wish အိမ်စီးယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါသူ ရှစ်ဦးအနက် ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ ကျော်ဇင်အောင်၊ ယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါသူ ဦးဌေးအောင် (၅၆ နှစ်) နှင့် ဒေါ်စိုစိုးမြိုင် (၄၅ နှစ်) (ဘ) ဦးနီ ကမာရွတ်မြို့နေသူတို့မှာ အခင်းဖြစ်နေရာတွင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး သုံးလသားအရွယ် ကလေး အပါအ၀င် ကျန်ငါးဦးတို့မှာ အသီးသီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူများနှင့် သေဆုံးသူများအား အမြန်လမ်းတပ်ဖွဲ့ပိုင်ယာဉ်ဖြင့် ည ၈ နာရီခန့်တွင် ဖြူးမြို့နယ်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပြီး ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် Wish အနက်ရောင် အိမ်စီးကားမှာ ရှေ့ခေါင်းပိုင်းနှင့် ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးနီးပါး ပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားကာ လူသေဆုံးမှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိအောင် ယာဉ်အားမဆင်မခြင် မောင်းနှင်သည့် Wish အနက်ရောင် အိမ်စီးကားယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ ကျော်ဇင်အောင်နှင့် အမြန်လမ်းမကြီးပေါ် တက်ရောက် မောင်းနှင်ခွင့်မရှိဘဲ တက်ရောက် မောင်းနှင်ခဲ့သူ ဇော်ရဲမောင်တို့အား ဖြူးအမြန်လမ်းမကြီး ရဲစခန်းမှ ယာဉ် (ပ) ၁၁/၂၀၁၇၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၄-က/၃၃၇/၃၃၈ အရ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။ ဇော်ဝင်းချစ်/ Eleven media